विदेशमा नेपालीको दशै रौनक – Saurahaonline.com
विदेशमा नेपालीको दशै रौनक
नेपालमा दशैंको रौनकता छ । हरेक नेपालीले वडादशैलाई धुमधामका साथ मनाउने गरेका छन् । मिठो खाने रमाइलो गर्ने मात्रै होइन, परिवारहरुबीच आपसी भेटघाट र सद्भाव बढाउने पर्वको रुपमा दशैंलाई लिने गरिन्छ । यो पटक पनि दशैंको रौनकता चितवन सहित देशैभर बेग्लै खालको छ । तर विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा के दशैंको प्रभाव देखिएको छ ? आज हामी गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए सेसेल्स का अध्यक्ष राम प्रसाद पन्त सँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेका छौं ।
प्रश्न : नमस्कार ।
उत्तर : नमस्कार ।
प्रश्न : आरामै हुनुहुन्छ ?
उत्तर : हजुर आरामै छौं ।
प्रश्न : दशैंको उत्साह कस्तो छ ?
उत्तर : विगत चौधवर्षदेखि घरपरिवार सँग बसेर दशैं बनाउने अवसर मैलें पाएको छैन् । विभिन्न कारणले मुग्लान प्रवेश गर्न बाध्य भयौं । तर दशैं लगायत हामी नेपालीले मनाउने चाडपर्व भुलेका छैनौं । यो पटक पनि दशैं मनाउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रश्न : विदेशको दशैं र नेपालमा बनाउने दशैंमा के फरक रहेछ ?
उत्तर : विदेशमा घर परिवार छैनन् । दशैं मनाइन्छ, साथीहरु जम्मा भएर रमाइलो पनि गरिन्छ । टिका लगाइन्छ, आफुभन्दा मान्यजनको हातवाट टिका लगाइन्छ । रोजगारीको सिलशिलामा अफगानिस्तान देखि अफ्रिकी मुलुक सम्म पुग्दा अनुभव, व्यस्तता र विभिन्न चुनौतीकाबीच पनि प्रत्येक वर्ष जमरा राखी कोत पुजा गर्ने गरेको छु । दशैको टिकाका दिन मेरो हातवाट टिका जमरा थाप्नेहरु पनि धेरै हुने गरेका छन् ।
प्रश्न : विदेशीहरुले दशैलाई कसरी बुझेका छन् ?
उत्तर : हामी बसेको देशमा नेपालीहरु मात्रै नभई विभिन्न मुलुकका र विभिन्न धर्मावलम्बीहरुले समेत टिका थाप्ने गरेका छन् । यो पटक पनि हामी त्यसैको तयारीमा जुटेका छौं । दशैंमा नेपाल जस्तै रौनकता नभएपनि हामी नेपालीहरु भेटघाट गर्ने, टिका लगाउने, एकले अर्कालाई आदर सम्मान दिने संस्कारलाई भने यो भूमिमा पनि जिवित नै राखेका छौं ।
प्रश्न : चाडपर्व आएपनि नेपाल फर्कीन मन लाग्दैन ?
उत्तर : कस्तो मन छुने प्रश्न गर्नुभो । चाडपर्व र विशेष दिनहरु आउन थाल्यो भने मन कडिन्छ । जति व्यस्त भएपनि एउटा मन नेपालतिरै दौडिरहेको हुन्छ । घरपरिवार, छरछिमेक, इष्टमित्र साथीभाइ सबैको सम्झना आउँछ । तर हामी रहरले होइन, बाध्यताले विदेशीएका हौं, अस्थिर राजनीति, बेरोजगारीले हामीलाई हाम्रा आफन्त परिवार संग टाढा बनाएको छ । हामी नजानिदो पाराले यहि भूमिमा रमाउन बाध्य हुने गरेका छौं । यो पटक त्यस्तै भो, अर्का वर्ष आउने छु भन्दै कयौं दशैं विदेशमै वितेको तितो अनुभव हामी सँग छ । आशा गरौं अर्को वर्षको दशैं नेपाल मै मनाउन पाउँ ।
प्रश्न : हुन्छ समय दिनुभो धन्यवाद । दशैंको शुभकामना पनि ?
उत्तर : विदेशमा बस्नेहरुको विषयमा सोधीखोजी र चासो लिनु भो तपाईलाई पनि धन्यवाद । र हामी विदेशमा बस्नेहरुको तर्फबाट पनि वडा दशैंको शुभकामना ।